lundi, 17 octobre 2016 21:37
Tahiri-tsary Sobika Farafangana
Farafangana : Milamindamin-dratsy
Nanomboka niverina ny filaminana aty Farafangana. Na izany aza, mbola misy tanàna tsy mirehitra mihitsy ny jiro.
lundi, 17 octobre 2016 07:17
Naninora-Betroka : Omby miisa 100 lasan’ny dahalo
Ny alin’ny zoma hifoha ny sabotsy 15 oktobra no nanafika ireo dahalo, mitam-basy. Omby efatra vala, manodidina ny zato eo no lasan’izy ireo tamin’izany. Hatramin'izao tsy hita ny nanjavonan'ireo dahalo miaraka amin'ny omby.
lundi, 17 octobre 2016 07:02
Anjozorobe : Hampiantrano ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena momba ny sakafo
Ankalazaina isan-taona isaky ny 16 oktobra ny Andro iraisam-pirenena momba ny sakafo. Anio alatsinainy 17 oktobra i Madagasikara no hankalaza an’io, hetsika izay hatao ao Anjozorobe, Faritra Analamanga.
dimanche, 16 octobre 2016 14:26
Namono olona sahady ny orana
Omaly asabotsy 15 oktobra, dia maro no tsy nanampo fa dia avy be tokoa ny orana, nirefodrefotra ny varatra, nisy avandra kely ihany koa ny teto Antananarivo manodidina. Maizina tanteraka ny andro tamin'ny 4 ora tolak'andro. Ny setroky ny doro tanety ihany koa nanampy trotraka. Tokony tamin'ny 6h30 hariva, dia nisy faty olona nitsengevana tetsy amin'ny tetezan'ny Andravoangy Mascar.
dimanche, 16 octobre 2016 12:24
Mahajanga : Hifidy Sefo Fokontany amin’ny 22 oktobra 2016
Tenimita navoakan'ny fitondram-panjakana no namaritra an’io daty hanaovana fifidianana Sefo Fokontany io. Betsaka anefa no tsy mahalala ny fisian’io fifidianana io. Fokontany miisa 26 no mandrafitra ny Kaominina ambonivohitra Mahajanga.
samedi, 15 octobre 2016 15:30
Bematsatso Ambatondrazaka : Nahazo masomboly voafantina 100 kg isam-pianakaviana ireo traboina
Afaka hiatrika ny taom-pambolena ihany ireo traboina tao Bematsatso Ambatondrazaka noho ny haintrano goavana nahamaizana 126 tafo ny alahady 9 oktobra 2016. Karazam-bary makalioka sy B22 no natolotry ny ministera ny fambolena sy fiompiana azy ireo omaly zoma 14 oktobra 2016.
samedi, 15 octobre 2016 14:01
Fihaonambe COMESA : Miverina an-dakazera avokoa ny miaramila
Nandraisana fepetra manokana ny fitandroana ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra sy ny manodidina, amin’izao fampiantranoan’i Madagasikara ny fihaonambe faha-19 ny COMESA izao, tanterahina ny 10 ka hatramin’ny 19 oktobra 2016. Miverina an-dakazera avokoa ny miaramila, miandry baiko sy toromarika, ankoatra ireo misahana ny fiarovana ny toeram-pivoriana sy ny toerana ipetrahan’ireo vahiny Afrikanina mpizaika. Miainga eny Andafiavaratra ny fibaikoana rehetra manodidina izany, ka ny Zandary no mandrindra ny resaka fiarovana ary ny Polisy kosa misahana ny fanangonam-baovao na « renseignement ».
vendredi, 14 octobre 2016 22:03
Sambava : Mandrahona hanao fitokonana ireo taksiborosy amin'ny Zotra rezionaly SAVA
Nanao fivoriana miafina androany ireo solontenan’ny mpitatitra amin’ny Zotra rezionaly SAVA, ka tapaka fa hanokana andro iray tsy hiasana izy ireo noho ny tsy fahazakana intsony ny « écolage » izay takin’ny mpitandro filaminana eny amin’ny lalana. 2000 Ariary izany teo aloha, avy eo niakatra ho 5000 Ariary ary amin’izao lasa 10.000 Ariary, izay mahatonga anay mpitatitra aty amin’ny Faritra SAVA manao taingim-be, mba tsy hidiram-patiantoka. Manao antso avo izahay mba hijery manokana ny fijaliana iainanay taksiborosy aty SAVA fa efa tsy ho zaka intsony, hoy ireo mpitatitra. « Leo kolikoly ka mitaky ny hanafoanana izany ! »
vendredi, 14 octobre 2016 21:54
Ambatoboeny : Nirehitra ny tanànan’Ambatoloaka
Trano folo tafo no levon’ny afo androany zoma 14 oktobra 2016, tokony ho tamin’ny 1ora tolakandro. Afo nandrahoana sakafo tsy voafehy tamina tokantrano iray no niitatra ka nitarika ny fahamaizan’ny tanànan’Ambatoloaka, Kaominina Tsaramandroso, Distrika Ambatoboeny. Fianakaviana miisa folo no traboina amin'izao fotoana izao.
vendredi, 14 octobre 2016 11:15
Ambositra : Tsy ampy solika ny Jirama
Hiaina fahatapatapahan-jiro ny eto Ambositra manomboka amin’ity zoma 14 oktobra 2016 ity. Filazana mandeha amin’ny radiom-paritra no nandrenesan’ny mpanjifa izany nanomboka ny misandratr’andro teo. Tsy fahampiana solika ao amin’ny Jirama no voalaza fa antony.
Page 338 sur 436